သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းစာသားမှားပြီး သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို...! - Thadin
[ April 20, 2019 ] မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ်…! NEWS
HomeCELEBRITYသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းစာသားမှားပြီး သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို…!
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းစာသားမှားပြီး သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို…!
April 15, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းစာသားမှားပြီး သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို…!
Myanmar Idol Season3ရဲ့ ဒုတိယဆုရှင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးပါ ။ သူမက ပွဲတွေမှာ သီချင်းတွေတောက်လျှောက်ဆို ဖြစ်နေပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက လက်ရှိသင်္ကြန်ကာလမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့က (၁၉)လမ်း မဏ္ဍပ်မှာ တခြားသော အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သီချင်းတွေ သီဆိုဖျော်ဖြေပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က မဏ္ဍပ်တွေမှာ လာရောက်အားပေးသူ ပရိသတ်တွေ အများအပြား အုံနဲ့ကြင်းနဲ့ ရှိသလို တီဗီရုပ်သံလိုင်းတွေကလဲ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုရအောင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကလဲ ပရိသတ်တွေကို မြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းတွေနဲ့ အားရပါးရ ဖျော်ဖြေပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မောင်ချိုတစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး စာသားတွေ မှားဆိုမိတာကို တချို့သော ပရိသတ်တွေက သတိထားမိကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ မောင်ချိုကို ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်အများအပြားကတော့ ဒါကို အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ လုံးဝမမြင်ကြပါဘူး။
အားကိုးမယ်နော် – ချမ်းမြေ့မောင်ချို
သီချင်းစာသားမှားလဲ မောင်ချိုလေးက နောက်ဆုံးထိ ပရိသတ်ကို စွဲဆောင်ပြီး ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မှားတာကို အပြစ်မမြင်ပဲ မေတ္တာနဲ့သာ ခံစားနားထောင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော်။ မောင်ချိုလေးလဲ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Myanmar Idol Season3ရဲ့ ဒုတိယဆုရှငျ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ အဆိုတျော တဈဦးပါ ။ သူမက ပှဲတှမှော သီခငျြးတှတေောကျလြှောကျဆို ဖွဈနပွေီး အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ ဆကျတိုကျလုပျကိုငျနပေါတယျ။ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုက လကျရှိသွင်ျကနျကာလမှာတော့ ရနျကုနျမွို့က (၁၉)လမျး မဏ်ဍပျမှာ တခွားသော အနုပညာရှငျမောငျနှမတှနေဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ သီခငျြးတှေ သီဆိုဖြျောဖွပေေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့က မဏ်ဍပျတှမှော လာရောကျအားပေးသူ ပရိသတျတှေ အမြားအပွား အုံနဲ့ကွငျးနဲ့ ရှိသလို တီဗီရုပျသံလိုငျးတှကေလဲ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုရအောငျ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ ပွသပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကလဲ ပရိသတျတှကေို မွူးမွူးကွှကွှ သီခငျြးတှနေဲ့ အားရပါးရ ဖြျောဖွပေေးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မောငျခြိုတဈယောကျ စိတျလှုပျရှားပွီး စာသားတှေ မှားဆိုမိတာကို တခြို့သော ပရိသတျတှကေ သတိထားမိကွပါတယျ။ တခြို့ကတော့ မောငျခြိုကို ဝဖေနျပွောဆိုတာတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ ပရိသတျအမြားအပွားကတော့ ဒါကို အပွဈကွီးတဈခုလို့ လုံးဝမမွငျကွပါဘူး။
အားကိုးမယျနျော – ခမျြးမွမေ့ောငျခြို
သီခငျြးစာသားမှားလဲ မောငျခြိုလေးက နောကျဆုံးထိ ပရိသတျကို စှဲဆောငျပွီး ဖြျောဖွပေေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ မှားတာကို အပွဈမမွငျပဲ မတ်ေတာနဲ့သာ ခံစားနားထောငျပေးပါလို့ တောငျးဆိုပါတယျနျော။ မောငျခြိုလေးလဲ ဒီထကျမက အောငျမွငျမှုတှေ ဆှတျခူးရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
မုန်းစေလို ပါးစပ်လက်လေးသစ် ချစ်စေလို ပါးစပ် လက်လေးသစ်တဲ့ငယ်ငယ်က မေမေဆုံးမနေကျ စကားလေးပါ…!
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၁၀) ချက်…!
Users Today : 2218
This Year : 175137
Total Users : 534161
Views Today : 8300
Total views : 2416189